सपना सपना पुस्तक बच्चा हो, त्यस्ता सपनाहरूको व्याख्या कसरी गर्ने?
एक सपना पुस्तक बच्चा हो, बच्चाहरु के बारे मा के कुरा गर्छन?
बच्चाहरु लाई प्रसन्नता को आनन्द को बारे मा सपने, तर यदि तपाईं विचार गर्छन कि सपना पुस्तक भन्छन्, बच्चाले विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गर्दछ। बालबालिकालाई निरन्तर हेरचाह चाहिन्छ, त्यसैले प्रायः सपनाहरूले सपना देखाउँछन् कि आमाबाबु वास्तविकतामा अनुभव गर्छन्। त्यहाँ अन्य व्याख्याहरू छन्, जुन सपनामा सहभागीहरूको भूमिकामा निर्भर छ।
किन एक बच्चाको सपना
यदि तपाईं सपनाको पुस्तकमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने एक बच्चा आशाको प्रतीक हो, यो प्राचीन समयदेखि नै जन्म भएको थियो, जन्म कहिले गाह्रो थियो, र स्वस्थ बच्चाको जन्म ठूलो आनन्द थियो। यो सपना को बारे मा एक बच्चा को जन्म दिन को बारे मा अधिक व्याख्या सकारात्मक हो। यो विश्वास छ कि बच्चा - लाभ र समृद्धि को लागि। तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, जसलाई यो योजना कल्पना गरिएको थियो:
एक जवान महिलालाई - पारिवारिक आनन्दमा;
एक वृद्ध महिला - सम्भावित रोगहरु।
यदि जन्म सजिलो थियो - यो व्यापारमा सफलताको पर्खाइमा मूल्यको लायक छ, यदि यो गाह्रो छ - पछाडि हुनेछ। केही अवस्थाहरूमा समय-समयमा शिशु - अप्रत्याशित मुनाफामा, अन्यमा - घातक हानिहरूमा। नवजातको उपस्थितिले पनि भूमिका खेल्छ:
सानो, पतला - लागू गर्न को लागी योजनाहरु को धेरै प्रयास को आवश्यकता हुनेछ;
ठूलो र स्वस्थ - व्यवसायमा त्यहाँ सफलता हुनेछ;
रक्तसँग दाग - आफ्नो आफन्तको मा रोग देखाउन सक्छ;
मृत-महत्वपूर्ण चिन्ताबाट चाँडै सफा गर्न सकिन्छ।
नयाँ नवजात शिशुको बारेमा कस्तो सपना छ?
यदि एक नवजात शिशुको सपना थियो भने, तर जन्म पछि, सपनाका पुस्तकहरु एक सुखद आश्चर्य को भविष्यवाणी गर्दछ। कहिलेकाहीँ एक सपना एक मामला को बारे मा खाली समस्याहरु जस्तै परिभाषित गरिन्छ। तर यो आवश्यक छ कि तस्वीरमा राख्नुहोस्: स्वस्थ बच्चा वा एक केटा, वा केटी। पुरुष र स्त्रीहरूको दर्शनमा एक बच्चा कस्तो देखिन्छ भनेर वर्णन गरिएको छ:
एक स्वस्थ बच्चा राम्रो समाचारको लागि हो।
एक पीडादायक बच्चा - असफलता।
यदि बच्चाले केटी वा केटाको सपना देखेको छ भने चाँडै उनी आफैलाई एक जोडी भेट्टाउँछन्।
एक जवान सानो केटा देख्यो - योजना सफल हुनेछ।
सानो बच्चा किन सपना देखिरहेको छ - एक केटी?
एक सपनामा बच्चालाई हेर्दा एक प्रकारको दिवाको प्रतिज्ञा (आश्चर्य) लामो समयको केटी मानिन्छ। यो सिर्फ नवजातको बारेमा छैन, तर ठूला बच्चाहरूको बारेमा, जब सेक्स निर्धारण गर्न सजिलो छ। उपचारको लागी बालबालिकाले धेरै वर्षहरुमा परिवर्तन गरेको छैन, सपना सपना पुस्तकहरु अझै पनि अपरिवर्तित परिवर्तनहरु लाई फेराउछन।
त्यहाँ अन्य संस्करणहरू छन्:
यदि बच्चाले केटीको सपना देख्यो भने, उनी तिनको प्रिय संग उनको सुलभ प्रतिज्ञा गर्छन्।
गर्भवती एक छोरीको जन्मको पर्खाइ हो।
एक केटीले हानिकारक हुन सक्छ, तिनका केहि आफन्तहरू लामो समयसम्म जान्छन्।
बच्चाहरूलाई ब्रेड गर्न को लागी परिवारमा थप्नको लागि।
किन सानो बच्चा एक केटा हो?
सपना सपना पुस्तकको रूपमा, एक सपना मा देखे बच्चा सपना सपना को सेक्स को आधार मा व्याख्या गरिएको छ। केहि कारणको लागि, बच्चाहरु को सपनाहरु मा आध्यात्मिक संग व्यक्तित्व र बच्चाहरु संग सामाग्री, ताकि बच्चा को सपना मा - जीवन मा भौतिक परिवर्तन को लागि। सपनाहरू उनीहरूले सकारात्मक आशा गर्छन्: राजस्व वृद्धि, वाणिज्यमा सफलता, एक सफल प्रोजेक्ट। र यदि सपना बिहीबार देखि शुक्रवार देखि देखी थियो , तपाईं पनि सम्पत्ति मा गिन सक्छ। त्यहाँका केटाकेटीको बारेमा धेरै संस्करणहरू छन्:
पारिवारिक वा काममा समस्याको बारेमा एक चेतावनी।
एक सुखद आश्चर्य को लागी।
गर्भवती हुनुको समय भन्दा पहिला जन्माउनु पर्छ।
स्तनपानको सपना किन?
आमाले स्तनपान गर्न निर्णय गर्नुहुँदा, उनको पहिलो इच्छा कुकुरको कुकुर प्रतिरक्षा र राम्रो स्वास्थ्य दिने छ। यसैले, यो माना जान्छ कि बच्चाहरु को दूध संग नींद मा खाना पकाने - ठूलो लाभ मा। एक महत्त्वपूर्ण भूमिका कुनै व्यक्तिले यस्तो सपनाको सपना देखाएको छ:
विवाहित महिला - सुखद परिवर्तन गर्न।
एक वृद्ध महिला - गम्भीर बीमारीमा।
युवा केटी - यो संकेत छ कि तपाईंको परिवारको बारेमा सोच्ने समय हो। यदि स्तनपानको भूमिका एक बालबालिकामा अर्को महिलामा आइपुगेको छ, र सपना मात्र मात्र हेर्दछ - साथी वा आफन्तहरूमा निराशाहरू हटाइएन।
बच्चाले कस्तो सपना देखाउछ?
सपना सर्ब्रेटर बच्चाहरु को दर्शनमा प्रायः प्रायः व्याख्या गर्दछ, यस तथ्यले गर्दा बच्चाहरु उदासी भन्दा बढी मजाक हुन्छ। धेरै महत्त्वपूर्ण सपनाको बच्चा हो जसले बच्चालाई सपनामा राख्छ:
मान्छे - काम मा काम मा समस्या या समस्याहरु मा कठिनाई हो, जो पुरा तरिकाले हल हुनेछ;
विवाहित महिला - त्यहाँ लाभदायक काम हुनेछ।
केटी - गर्भावस्थाको लागि;
उन्नत उमेरका व्यक्तिहरू - संवर्धन गर्न।
केही सपना पुस्तकहरू भन्छन कि एक बच्चा सपना देखा पर्यो - यो महत्वपूर्ण योजनाहरु को पतन को लागी लायकको लायक छ, एक संकेत छ कि यो कठिन परिस्थितिबाट बाहिर हुन समय हो। यदि यो एक अपरिचित बच्चा हो भने, चाँडै नातेदारहरूले तपाईका जटिल समस्याहरु संग बोझ गर्ने प्रयास गर्नेछन्। यो फारममा ध्यान दिन लायक छ:
धेरै सानो - धेरै आश्चर्यलाग्दो;
सुन्दर, स्वस्थ - आनन्दित परिवर्तनहरूका लागि;
गन्दा - अनपेक्षित समस्याहरू;
मरीज - समस्याको लागी।
नर्स को सपना किन एक बच्चा?
यदि तपाईलाई बालबालिकामा बच्चालाई बेबी गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईले चाँडै हालको समस्या समाधान गर्न गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ। जब दुल्हन वा दुल्हन को यस्तो सपना सपना एक संकेत हो कि जीवन साझेदार एक विश्वसनीय समर्थन हुन सम्भव छैन। व्याख्या, जिसका मतलब सपना मा बच्चा, जसलाई तपाईं नर्स गर्नुपर्दछ, तपाईंलाई सावधानीपूर्वक प्रयास गर्नु पर्छ, किनभने तिनीहरू धेरै विरोधाभास छन्:
निकटतम योजनाहरु लाई स्वीकार गरेन, यहां सम्म कि लागी लागी लागू प्रयासहरु लाई पनि ध्यान दिइनेछ।
कामले उत्कृष्ट परिणाम ल्याउनेछ।
तपाईं ती विश्वास गर्नेहरूद्वारा धोका पाउन सक्नुहुन्छ।
बच्चा संग एक घुमक्कड किन सपने?
सपनाको पुस्तक बच्चाहरु को बारे मा सपना को विषयहरु को आधार मा संस्करणहरु लाई पनि प्रदान गर्दछ। मानिसहरू प्राय: कसरी व्हीलचेयरमा बच्चा रोलन्छन् भनेर सपना देख्छन्। बाहिरबाट हेर्न - तपाईं टाढा यात्राको लागि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। घुमक्क बस्यो सँग हिड्यो? एक राम्रो मित्रले यात्रा सम्बन्धी एक उपहार प्रस्तुत गर्नेछ। ज्योतिषी सल्लाह: यो सपनामा एक व्हीलचेयरमा एक बच्चालाई सम्भव हुन सम्भव थियो, त्यसपछि तपाईलाई ध्यान नगर्ने यौन ध्यान दिनु पर्दछ, तर उनको मनमा:
हँसिलो र मुस्कुराउने - तपाईंको प्रिय संग, सम्बन्धहरू समायोजन गरिनेछ, कुनै झन्झट कस्तो छ भन्ने कुरामा।
रोइरहेका र प्रचलित - लागतहरू अपेक्षित हुन्छन्।
छोराछोरीलाई कुटपिट गर्ने सपना किन?
ज्योतिषीहरू निश्चित छन्: बच्चाहरूको सपना वास्तविकतामा अशांतिको कारणको बारेमा सङ्केत गरिएको छ। विशेष गरी यदि तपाईंले सपनामा बच्चालाई हराउनुभयो। समान विषयहरूसँग धेरै व्याख्याहरू छन्:
अवस्थित अवस्थाको साथ असहमति, दोषी महसुस गर्दछ।
तपाईंको बच्चालाई थप ध्यान दिन आवश्यक छ संकेत।
एक महत्त्वपूर्ण कुराको सम्झना जुन पूरा भएको छैन यो परिष्करणको लायक छ, र समस्याहरू टाढा जान्छ।
यदि सपनामा कसैले अरू कसैको सन्तानलाई छोप्छ भने - जीवनमा त्यहाँ राम्रो परिवर्तन हुनेछन्। मुख्य कुरा यो हो कि तपाईं सही दिशामा जान्नुहुन्छ, र तपाईं रोक्न सक्नुहुन्न।
केही सपनाका किताबहरूले आफैंलाई ध्यान दिन्छन्:
पोपमा सानो बच्चालाई थप्पड - एक सज्जन संग प्रदान गरिनेछ।
अनुहारमा बच्चालाई हिर्काउनुहोस् - अप्रिय गल्ती उठाउनको खतरा छ, जसलाई पछुतो पर्छ।
प्रभावबाट त्यहाँ रगत थियो - नातेदारहरूलाई तत्काल मद्दत चाहिन्छ।
किन रोइरहेका बच्चाको सपना?
बच्चाहरु को सपने जो आँसुहरु लाई डालते हो - अपेक्षित समस्याहरु र स्वास्थ्य समस्याहरुको संकेत। यदि शान्त रहन बच्चा भाग्यशाली छ भने गम्भीर विफलताहरू रोक्न सक्नेछन्। एक केटा सपना सपना - यो रिश्तेदारों मा अधिक ध्यान दिन को लायक छ। केटी - त्यहाँ रोगको खबर हुनेछ। एक जवान केटीलाई यस्तो सपनाको लागि - तपाईंको प्रियसँग विभाजन गर्न। सपना व्याख्या समझाओ किन बच्चाहरु को सपने को रोते, आफ्नो उमेर को आधार मा:
बच्चा - लामो समयदेखि दुश्मनसँग मिलाउन सक्षम हुनेछ;
तीन वर्षको उमेरमा - त्यहाँ व्यापारमा समस्या हुन सक्छ;
तीन वर्षको बच्चा एक खाली चोर हो;
किशोर - भावनात्मक अनुभव ।
बीउ बच्चा किन सपना देखाउनुहुन्छ?
सानो बच्चा बिरामी भएको सपना देखेको छ - यो एक खराब चिन्ह हो। सबै ज्योतिषीहरू यो अप्रिय संस्करणहरूसँग व्याख्या गर्छन्:
आमाले रोग उठाउन सक्दछन्।
परिवारको लागि दु: खी खबर।
सहकर्मीहरू वा परिवारका सदस्यहरूसँगको खराब सम्बन्धले ठूलो द्वन्द्वमा परिणत गर्न सक्छ।
यदि अपरिचित बच्चा बिरामी छ भने, अप्रिय चीजहरूमा सपना सपना प्रयोग गर्न प्रयासहरू गरिन्छ।
एक नग्न बच्चाको सपना किन?
नवजातहरू अक्सर नग्न सपना देखाउँछन्, यो सपनाले धोखा वा समस्याको संकेतलाई मानिन्छ। के बच्चाको घाँटी अज्ञात बच्चा हो? चाँडै, त्यहाँ कसैको काममा pozaritsya को प्रलोभन हुन सक्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि कसरी नग्न सानो बच्चा एक सपनामा कल्पना गरिएको छ:
सानो केटीलाई प्राथमिकता दिन को लागी गम्भीर समस्याहरू हटाउन।
एक सपनाको टुक्रा भाग्य भाग्य छ।
एक व्यक्ति पकडिरहेको छ - सही मद्दत समय मा प्रकट हुनेछ।
एक महिला होल्डिंग - व्यवसायमा भाग्य हुनेछ, तर ईर्ष्या हस्तक्षेप गर्न सुरु हुनेछ।
डाइभिंग बालको बारेमा कस्तो सपना छ?
स्थिति जब एक बच्चा पानी बाट बाहिर जान सक्दैन र तल जान्छ भयानक र वास्तविक छ, त्यसैले यो सपना अप्रिय छ। अपवाद भनेको बच्चाले खाली पानीमा फ्लाउन्डर गर्ने हो - यो भाग्यको लागि हो। राम्रो चिन्हले बच्चालाई बचाउनेछ - कठिन समस्याहरू विघटन हुनेछ। ज्योतिषीहरुलाई व्याख्या: एक सपना मा देख्न को लागी एक बच्चा बच्चाहरु को मदद को लागि एक सिग्नल हो, यो समय मा हस्तक्षेप को लायक छ, र वास्तव मा सबै केहि राम्रो तरिकाले बदलन हुनेछ।
छोराछोरीलाई बचाउने सपना किन?
सपनाको पुस्तकको अनुसार, जसको बच्चा कुनै प्रकारको समस्याबाट बच्न सकिन्छ: चाँडै नै सपनाले मदतको आवश्यकता पर्नेछ। यस सपनाको धेरै व्याख्याहरू छन्:
एक अपरिचित बच्चालाई बचत गर्नुहोस् - भौतिक लाभहरूमा।
मुसीबत बाहिर केटीलाई अरूको खर्चमा सफल हुनु हो।
केटाको बाहिर मद्दत गर्नुहोस् - तपाईंलाई सहयोग चाहिन्छ।
शिशुको सपना देखियो: आरामदायक जीवनमा पैसा बनाउन प्रयास सफल हुनेछ।
छोराछोरीलाई हराउने सपना किन?
एक सपना मा बच्चा खोज्दै वास्तविकता मा प्रमुख अशांति बारे एक चेतावनी हो। यदि खोजी सफल छ भने, समस्याहरूबाट टाढा रहनेछ। ज्योतिषीहरूलाई कसरी यो र कहाँ भयो भनेर विवरण सम्झन सल्लाह दिइएको छ, त्यसपछि व्याख्या अधिक सटीक हुनेछ:
बच्चा हिड्ने र हानिकारकमा हिड्यो।
जंगलमा हराएको - परिवारमा समस्या हुनेछ।
जिप्सियों चोरी - एक अप्रिय स्थिति को लागि एक बंधक हुनेछ।
बच्चा खोज्दै - त्यहाँ पुरानो त्रुटिहरू छन् जुन सुधार गर्न आवश्यक छ।
बच्चाको मृत्यु किन हुन्छ?
एक बच्चा को मृत्यु एक धेरै भारी सपना र एक खतरनाक सिग्नल हो, यो संकेत छ कि उनको बच्चाहरु जोखिम मा हुन सक्छ। यदि तिनीहरू आफ्ना सन्तानको सपनामा मरेका छन् भने पहिले देखि नै हुर्काएका छन्, यसले उनीहरूको जीवनमा अवरोधहरू देखाउँछ। मरिसकेको बच्चाको बारेमा कस्तो सपना छ:
नवजात - प्रायः निर्णयहरू विरुद्ध चेतावनी।
केटी - न्यायिक दावी मा ऋण तिर्नेछ।
केटा - तपाईंको बच्चाहरु को स्वास्थ्य को बारे मा चिंतित होने को कारण हुनेछ।
एक सकारात्मक व्याख्या केवल प्लाटको बारेमा फ्रान्सेली सपना पुस्तक द्वारा दिइन्छ, यदि मृतक बच्चालाई कल्पना गरिएको थियो। बेरोजगारले यो रकमको मामिलामा ठोस मुनाफाको साथ अर्डर ल्याउने प्रतिज्ञा गरेको छ।
सपना कस्तो छ?
सपना को परिस्थिति को आधार मा बिल्ली के बच्चा को सपना के हो?
सपना व्याख्या - बिल्लियों, कसरि बच्चाहरु को बारे मा सपनाहरु को व्याख्या गर्न को लागि?
एक चिन्ह चाकू खोज्नु हो
किन तपाईंको कलाईमा रातो स्ट्रिङ लगाउनुहुन्छ?
किन फूल फूलहरू?
ट्रिनिटीमा लोक विशेषताहरू
साईन - दाहिने आँखा ब्लिच
एक जना महिलाले किन बिहे गर्ने सपना देखाउँछन्?
सूरजमुखीको सपना किन?
दुलहीको लागि विवाह चिन्ह
हामी गोठालोको बारेमा किन सपना देख्छौ?
कुन दलको सपना देख्नुहुन्छ?
पिन माथिको शैली मेकअप
ओक्सेलुरिया संग आहार
बच्चाहरु मा ब्रोंटेइटिस को लक्षण
बेली नृत्यको लागि पूर्वी संगीत
कसरी आफ्नै हातमा शिफनको टुक्रा सिलाई पार्नु हुन्छ?
आफ्नै हातले चिन्चिलाको लागि पिंजरा
महिलाहरु को लेन्स जाँघिया
कुञ्जी के हो?
स्नानको लागि थर्मोस्टेट
Puppies को लागि सूखी खाना
Oscillococcinum एक एनालॉग हो
"7 पंखुल्स" को एक आहार मा कसरी वजन गुमाउने?
एक छलांग वर्ष मा वेडिंग लक्षण
परीक्षणले गर्भावस्था देखाउँदैन
इमेलेलको साथ बालियां - हरेक स्वादको लागि सुन्दर र स्टाइलिश बालबालिकाका फोटोहरु
Swimsuits - गर्मी 2016
डोपेल हर्ट्जको वजन घटानेको लागि
जेसन क्लार्क र इमिला क्लार्क